MaTaliyane muSemi-rusununguko kubva kuCOVID-19: Asi kwete yeVose
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » wedzero » MaTaliyane muSemi-rusununguko kubva kuCOVID-19: Asi kwete yeVose
Kuputsa Kufamba Nhau • wedzero • Italy Kuputsa Nhau • nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Phase 2 yehutano manejimendi ye COVID-19 muItaly yakakwaziswa nekushinga kwemamirioni akasangana nenguva refu yekukiya. Kunyanya, vana, vadzidzi, uye vechidiki vanotorerwa kushamwaridzana kwemazuva ese vakasununguka vachifara.
Pakati pemwedzi miviri yekuparadzaniswa, rusununguko rwakarambwa kune vese rwakapembererwa nenziyo dzekuzvikurudzira mukugadzwa kwezuva nezuva. Panguva imwecheteyo manheru, kutevedzera nhetembo yakakurumbira "a la cinco de la tarde" (na2 masikati) kuzembera nepamahwindo nemabhalconi epamba kwakarira kwaya inosuruvarisa yemufaro.
Kumbomira - kana humbowo hwerusununguko - kwakapihwa kubva Chivabvu 4 kusvika 18, asi kwete kune wese munhu. Uye zvakauya nekutyisidzira kwekudzoreredza kukiya kana iyo mirau isina kucherechedzwa uye hutachiona hutangazve.
"Kwete munhu wese" izano rakanyarara kune avo vanopfuura makore makumi matanhatu ekuberekwa avo parizvino vanorambidzwa kunakidza rusununguko. Ndiyo njodzi nyowani yakatorwa nehurumende kudzivirira yechipiri wave ye Covid-19 rufu, kunyadziswa, uye kupererwa.
Pakati pemitemo, pamusoro peiyo yakakosha pane hutsanana uye madaro, pane kurambidzwa kwemisangano neshamwari kunze kwekunge "zvine hukama" asi musangano wakasununguka pakati pevakomana nevasikana unobvumidzwa kunyangwe vasingagare pamwe chete. Musangano pakati pehama unogona kuitika kusvika kuchizvarwa chechitanhatu, asi zvinorambidzwa kuyambuka miganho yedunhu yekugara kuti uite saizvozvo.
Iyi yese mimwe mitemo inovhiringidza yehuwandu hwevanhu hwakatovhiringidzika nekupararira kwemazuva ese kwenyaya dzinogara dzichipesana. Izvo zvinongowedzera mukusagadzikana kusingatsungiririki, kunyanya kusanganisira kufambiswa kwedata maererano nerufu rwunobva kumisha inochengeterwa vakwegura.
RSA yegoridhe limbo
Kune 6,715 700 yeruzhinji uye yakazvimiririra (yepamutemo) nzvimbo dzekuchengetedza hutano (RSAs) dzakapararira muItari, iyo National AUSER sosi inofungidzira kuti kanokwana vamwe mazana manomwe vanofanirwa kuwedzerwa kuhuwandu hwevakafa, asi nhamba yacho ichiri isiriyo sezvo panga pasina kuverenga kwevanhu.
MaRSA mazhinji auya pamberi nekuda kwekukanganisa manejimendi zvikonzero, uye sango rakatsanangurwa mune zvisakanaka sekukanganisa mvumo (kuramba ichimhanyisa bhizinesi), rubatsiro rusina kukwana rwekuwandisa kwevanhu, kushomeka kwehutsanana, nekushungurudza varwere vasina zvombo yakatsanangurwa.
Iri ibhizinesi rinokurudzirwa nemupiro wakasarudzika wematunhu, unoenzana nemazero mazhinji, ayo bhenefiti yemasangano asiri pamutemo asina kusiiwa.
Uye pano ndipo pavanofa kupfuura miganho sezvinoratidzwa nenhamba dzevanhu vakafa muItari - 29,684 kubva muna Chivabvu 6, 2020, iyo inosvika makumi matanhatu muzana (60) yakabva kumaRSA. Dzakawanda dzenzufu idzi dzakaitika mudunhu reLombardy uye kunyanya muMilan uko chimwe chezvivakwa chikuru chiri kuongororwa neHofisi yeMuchuchisi wePublic yekuviga mitumbi makumi matatu muchikamu chekutanga chehosha. Izvi zvakatanga kirasi-chiito nehama vachipesana nehutungamiriri kune ino unzenza yekudzokorora RSA.
Mubvunzo unomuka zvine mutsindo: Vangani gumi nevaviri vakasara vakafa nehutachiona? Kubva kutsvagurudzo yakaitwa (nemupepeti uyu) pane chiteshi chepamutemo, iyo Italian Cancer Registry Association (AIOM) inoratidza kuti mu11,874 chirwere ichi chakaparadza 2019 hupenyu (371,000 varume ne196,000 vakadzi).
Tsvagurudzo yezverufu nekuda kwezvimwe zvikuru zvirwere zvakaitiswa neITTAT.IT (hofisi yehurumende) inoratidza kufa kwevanhu mazana maviri nemakumi mairi muna 240,000 nekuda kwekurwadziwa kwemoyo uye sitiroko. Saka, zvinoita here kubvisa kuti pakati pevanhu 2019 (vasiri maRSA) chikamu cheavo vane chirwere chekare chakanyoreswa muchikamu chehutachiona? Ndechipi chokwadi pamusoro pekuparadzwa kwehutachiona?
Vanachiremba: magamba kumberi mitsara
Mutungamiri wemakambani makuru emhuri yemubatanidzwa, FIMMG (Italian Federation of General Practitioners), VaScotti, vanochema nekuzvipira kwechiremba zana nemakumi mashanu nemana vakazvipira kuponesa vamwe vanhu hupenyu. Vakamhanyira muhutachiona vasina kuwana zvekuchengetedza uye ruzivo rwakakwana. Ivo vaive vazvipiri vanyajambwa vachicherechedza nhoroondo "Hippocratic Oath." Uye ngatirege kukanganwa kufa kwevanamukoti nevashandi veRSA.
Kutanga kwemabasa ebasa
Vashandi vane mamirioni mana vakatangazve basa neMuvhuro, Chivabvu 4, uye vari kutakura dzimwe gangaidzo navo. Mumazuva ezvakafanira kuchengetedza vakwegura, vane zera repakati nepakati. Ivo vari pamusoro makumi mashanu uye kazhinji muNorthern Italy. Kune mamirioni 50 anozoramba achisara pamba akamirira matanho anotevera ehurumende.
Kudzoreredza basa kwakanyatso tariswa munzvimbo dzakanyanya kubatwa nehutachiona: kurwisa 2.8 mamirioni evashandi muNorth Italy avo vakadaidzwa kudzokera kubasa. Izvi zvinosanganisira 812,000 pakati penyika uye 822,000 kumaodzanyemba.
Masks ekumeso: Bhizinesi regoridhe remuzana ramakumi maviri nemasere
Kune purofiti mune nhamo kana sekutaura kwevaItari, "mors tua via mea" (kufa kwako, hupenyu hwangu). Njodzi dzekare dzakasikwa kana dzakatengwa muItaly anga ari iwo mukana wekupfumisa ivo vanowana mari nekushayisa vapenyu.
COVID-19 yakapa mumwe mukana wekuti vanhu vasina hunhu vaite zviri pamutemo. Pakati peizvi, vamwe veruzhinji "pamusoro pekufungidzira" vauya pamberi kusanganisira vanogadzira mishonga nevatengesi vavo. Iri bhizinesi rine kukosha kwaro kunosvika kumabhiriyoni mazhinji ema euro kuisa mari munzvimbo dzemitero.
Kazhinji kushoropodzwa pazvikanganiso zvehutungamiriri hwehurumende yeItaly
Kuvharwa kwenguva refu kwemaindasitiri uye zviitiko zvidiki zvehupfumi kwaisa dambudziko pahupfumi hweItaly hwave kudonha. Rubatsiro rwehupfumi rwakavimbiswa rwekudzoserwa kwemaSME rwakarambwa nemabhangi, nekuti hazvivimbiswe nehurumende - kunyangwe izvi zvakavimbiswa.
Tourism iyo inomiririra 13% yeGDP yenyika yakaomeserwa zvakanyanya mugore razvino.
Kunetsana kuri pakati penzvimbo nematunhu
Matunhu makuru atora matanho ekuzvitonga achidarika mirau inoonekwa seisina kukwana kuchengetedza hupfumi hwenzvimbo. Zvakare nzvimbo yeSicilian vezvemabhizimusi vakatsunga zvakasimba kutangazve bhizinesi vasingateerere mirairo. Nepo machechi achiti anotangazve mabasa echitendero anozotangazve kubva muna Chivabvu 18.
Iyo yakaipa mhedzisiro kune varombo uye vashandi munharaunda
Iko kukiya kwakatungamira zviuru zvemhuri muhurombo hwakadzika uye nekushaikwa kwemabasa. Vanhu ava vaiti vakasiiwa nehurumende, kudzamara kuchema kwenguva refu kwekusuwa kwaburitsa mufananidzo waMunk (mupendi wekusuwa) achiwana vocha yechikafu nezvikwereti zvidiki zvinofungidzirwa kuti hazvina kukwana uye zvinonyadzisa nevamwe vezvematongerwo enyika.
Urombo huripo hwawedzera. Rubatsiro runouya kubva ku pietas yechechi uye kubva kune avo vanogona kupa. Hondo yevarombo yakamanikidzwa kuzvibvisira ivo vamene zvinhu zvidiki zvakakosha uye mhuri dzinochengeta, kuti vagone kuzvitengesa kana kuenda nazvo kuchitoro chevaridzi. Nepo dzimwe nyika dzenharaunda yeEurope dziri mumamiriro ezvinhu ehupfumi ari nani, ivo havana kuzeza kupa rubatsiro rwakakwana rwemari nekukurumidza kune vagari vavo.
Iwo majeri akavhurika kurusununguko rwepamusoro pfuti Italian Mafia
Izvo hazvisi nekuda kwekuregererwa kwakapihwa napapa mutsva kana neMutungamiriri weRepublic, asi kukanganisa kwakakomba kwazvo kwakaitwa nebazi reGrace neRuramisiro - mutongi weCOVID-19.
Kune makumi matatu nemakumi matatu nemapfumbamwe evasungwa vakanaka avo vevaCamorra, Mafia, uye Ndrangheta vakasungwa pasi pehutongi hwe "349bis" (jeri rakaomarara) vakasunungurwa nekuda kwenjodzi yekutapukira kubva ku coronavirus. Izvi zvingave zvakaitika sei?
Kusava nechokwadi kwakawandisa kwakataurwa nepepanhau reTurin La Stampa iro rakapindura muchidimbu chinyorwa chakareba chakatsaurirwa nyaya iyi: “Zviitiko zveruramisiro nezvematongerwo enyika hazvina kumbobvira zvave 'nyaya dzakareruka' munyika medu (Italy). Uye kugadzwa, kwemakumi emakore-tsika dzakareba, zvakagara zvichiongororwa nekutongwa kwevazhinji vanopokana: mapato, shamwari dzevematongerwo enyika, mafungu eutongi, zvido zvemapoka emagetsi, uye 'chikwereti chekutenda. 'zvakanyatsobatana munguva yacho. ”
Nyaya ine humbowo hwakakanganisika inoona Gurukota rezvemitemo, Bonafede protagonist akabatwa muwebhu rebhuruu achizviwisira pasi mea culpa uye achikurudzira chirongwa chekudaidza nhengo dzeMafia kujeri.
Italy inokumikidza rwiyo kune chero chiitiko, uye rwiyo rwakakodzera kune iyi inoshamisa kesi ndeiyi: "Folle Idea" (Benzi Pfungwa). Zvichakadaro, Italy inodedera uye inogutsa kufunga kukuru kwaCancellor Merkel: "Mafia angabatsirwe nerubatsiro rwakakura kuhupfumi kuItaly."
Italy, inozivikanwa kunge nyika yezvishamiso, ichamuka kubva pane zvakafanotaurwa apocalypse uye ichibuda yakafumiswa nezuva idzva rekupemberera munhoroondo - Chivabvu 4, 2020 - apo madziro akatanga kudzika.